Shiinaha Fused Silica Soo Saaraha Maalgashi iyo Soo-saare | Dinglong
Fused Silica waxaa laga sameeyaa silica nadiif ah oo sareeya, iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad isku dhafan oo gaar ah si loo hubiyo tayada ugu sareysa. Silica Our Fused wuxuu ka sareeyaa 99.98% amorphous wuxuuna leeyahay isku dheelitirnaan aad u hooseysa oo ah ku-ballaarinta kuleylka iyo u-caabbinta sare ee shoogga kuleylka.
Ku dhowaad eber maaddada 'silica crystalline'
Silicaheena isku dhafan waxay leeyihiin isugeyn balaaran kuleylka oo aad u hooseeya waxayna u ogolaaneysaa dhisida qolofka dhaqsaha badan. Dinglong silused silica wuxuu damaanad qaadayaa in sifiican loo daboolo geesaha iyo godadka si loo yareeyo dildilaaca qolofka. Waxay sidoo kale yareysey daaqa ku jira taangiga qulqulaya. Taasi waa sababta silica-geenna laysku daray si ballaaran loogu adeegsado geedi socodka shubista maalgashiga si loo gaaro xasillooni heer sare ah iyo saarista qolof fudud.
Dinglong wuxuu soo saaraa noocyo badan oo silica alaabooyin isku jira ah iyo buundooyin alaabooyin gaar ah si loo buuxiyo dhammaanba shuruudaha hannaanka maalgashiga. Dhammaan buundooyinka lagu shubo maalgashiga waxaa lagu soo saaray xaalado si taxaddar leh loo kontoroolay si loo siiyo macmiilkeenna tayada iyo joogtaynta lagama maarmaanka u ah inay ku shaqeyso geeddi-socodka shubista maalgashiga.
Dinglong silica la isku qurxiyo ayaa laga heli karaa fasallo kala duwan iyo cabbirro kala duwan oo walxaha caadiga ah iyo sidoo kale loo habeyn karaa qeexitaankaaga. Waxyaabahani silica ah ee la isku daray ayaa lagu hagaajin karaa baahiyo gaar ah oo codsi ah waxaana laga heli karaa 2,200 lbs. (1,000 kg) jawaano cufan.
Kuwani silica isku dhafan ee maalgashiga loo shubay waxaa laga soo saaray xarun la xaqiijiyay oo ku taal Lianyungang, Shiinaha. Muddo 30 sano ah oo la aasaasayey, Dinglong wuxuu kasbaday taageero farsamo iyo farsamo oo xoog leh iyo khibrado aad u tiro badan oo lagu soo ururiyey soosaarida agab quartz ah Hawlaheena wax soo saar waxaa loo habeeyay isku waafaqsanaanta iyo isku halaynta - caawinta hubinta tayada iyo qiimaha wax soo saarka la isku halleyn karo. Waxaan aaminsanahay in alaabooyinka la isku halleyn karo ay naga caawin karaan helitaanka iibinta hoggaaminta iyo dhisidda kalsoonida iyo saaxiibtinimada macaamiisheenna.
Hore: Silica Fused for Warshadaha elektaroniga
Xiga: Silica Fused for Refractory Codsiga